Fumana iZiko leGravity yoyilo oluKhulu lweNtetho | Martech Zone
Fumana iZiko leGravity yoyilo oluKhulu lweNtetho
NgoMvulo, Meyi 6, 2019 NgoLwesihlanu, Meyi 10, 2019 UKory Grushka
Wonke umntu uyazi ukuba iPowerPoint lulwimi lweshishini. Ingxaki kukuba, uninzi lweepowerPoint alunanto ngaphandle kothotho lwezilayidi ezixineneyo kwaye zihlala zibhidanisa ezihamba nesoliloquies ezinciphisa ukuphefumla ngabasasazi.
Siphuhlisile amawaka-ntetho, sichonge ezona ndlela zilula nezilula, kodwa kunqabile ukuba ziqeshwe. Ukuza kuthi ga ngoku, sidale Iziko loMoya, isakhelo esitsha sokwenza intetho. Umbono kukuba idesika nganye, isilayidi ngasinye, kunye nesiqwenga somxholo ngaphakathi kwidonki sifuna indawo ekugxilwe kuyo. Ukwenza njalo, umntu kufuneka acinge malunga neenkcazo-ntetho ezivela kwiindawo ezintathu: (1) i-macro, intetho ebanzi, (2) isilayidi-ngesilayidi, kunye (3) kwinqanaba legranular, apho yonke idatha yedatha okanye umxholo kuyo nganye isilayidi siqwalaselwa ngononophelo.
Thatha imbono yeMacro
Ukuqala, cinga ngentetho evela kumbono we-macro, ujonge intetho yakho xa iyonke. Yeyiphi eyona ndawo kugxilwe kuyo kwinkcazo-ntetho yakho, eyenza ukuba indawo yokuhlangana ibumbane kwaye icacise injongo yomboniso wakho? Emva koko yiya kwinqanaba elinye ngokunzulu. Isilayidi ngasinye kufuneka siqhubele phambili ngabom kwinjongo yomgangatho. Ukuba ayenzi njalo, kuya kufuneka ubuze, iyintoni injongo yesilayidi? Ingena njani kumfanekiso omkhulu wentetho?
Ngaphaya koko, isilayidi ngasinye kufuneka sibe neZiko laso loMxhuzulane, ukugxila ekubambeni kunye, kusinika ukulingana kunye nokudibana. Okokugqibela, sondeza kufutshane nomxholo wesilayidi ngasinye. Vavanya umhlathi ngamnye, itshathi nganye, isihloko ngasinye. Into nganye, itafile okanye igrafu kufuneka ithethe kugxilwe kwinkcazo, kodwa ikwafuna indawo ekugxilwe kuyo.
Makhe ndibonakalise ngomzekeliso. Thatha indawo yethu yelanga. Ilanga yeyona nto iphambili kwinkqubo yelanga kwaye inomtsalane kumhlaba ngamnye. Nangona kunjalo, iplanethi nganye inomtsalane wayo. Ngendlela efanayo, isilayidi ngasinye, kunye nayo yonke into kwisilayidi ngasinye, kufuneka ithethe kwiziko lomxhuzulane (okt, ilanga). Nangona kunjalo, njengeeplanethi kwindlela yethu yelanga, isilayidi ngasinye kunye nayo yonke into kwisilayidi ngasinye nayo kufuneka ibe nokugxila kwayo, okugcina kugcinwe kwaye kuhambelana.
Makhe siqwalasele ezinye zeendlela kunye namaqhinga okuqinisekisa ukuba kugxilwe kugcinwe kwinqanaba ngalinye.
Cinga ngeDekki yakho xa iyonke
Inkcazo-ntetho yakho iphela kufuneka ibe nombono omnye, umxholo okanye injongo. Kufuneka kubekho injongo efanayo. Ngaba le deck ithengisa umsebenzi wakho, izimvo zakho, uphando lwakho? Ukuba kunjalo, misela into oyithengisayo. Ngenye indlela, ngaba umgangatho wakho wabelana nje ngomsebenzi wakho, ukwazisa ngaphandle kwesidingo sokwenza ukuba abaphulaphuli bathathe inyathelo. Ukuba uyabelana, zeziphi izinto ofuna ukuba abaphulaphuli bazithathe kumboniso?
Emva koko, qwalasela abaphulaphuli. Kwinqanaba le-macro, cinga ngokwakhiwa kwabaphulaphuli bakho, nokuba ngabathengi, ulawulo, okanye umbutho obanzi. Uninzi lweentetho alulungelelaniswanga kakuhle kwiimfuno zabaphulaphuli. Endaweni yoko, zakhiwe ngokwembono yezithethi, kodwa kubalulekile ukwahlula abaphulaphuli bakho kunye nokwakha ibali lakho elibangqongileyo. Kutheni belapha? Lithini inqanaba labo lobungcali kunye nendima? Bangakanani abanomdla wokufumana iinkcukacha zegranular, ii-acronyms, njalo njalo? Athini amaxhala abo obuchwephesha, iifowuni zabo zokwenza? Ngaba bayathandabuza okanye bayakholwa? Luhlobo luni lokuchasana oza kuthi ujongane nalo? Iimpendulo ziya kunceda ekubekeni indlela owakha ngayo umgangatho wakho. Ukucinga nzulu ngabaphulaphuli bakho ngaphambi kokwakha intetho yakhoiya kunceda ukwandisa 'ifuthe layo.
Okokugqibela, qaphela ukumanyana. Buyela umva kwaye ujonge konke kuyilo kunye nembali yokubalisa. Okokuqala, yakha isakhiwo esibalisayo. Inkcazo-ntetho ayilulo uthotho lweengcinga eziqhawuliweyo, amanqaku edatha okanye ukuqaphela, kodwa yeyona ndlela iphambili yokubalisa amabali emultimedia. Uyilo lwentetho luqeqesho oluhlumayo oludibanisa amagama, ividiyo, oopopayi, idatha, nayo nayiphi na imithombo yeendaba enokucinga.
Umgangatho ngamnye ufuna ukwakheka okubalisayo; ukuqala, phakathi, kunye nesiphelo, ngelixa usaphula iikhonsepthi ezingundoqo zibe ngamacandelo kunye namacandelwana. Okukhona umxholo unzima, umbutho uyafuneka ngakumbi. Umntu ufuna isiphatho kwiikhonsepthi zeqela, enze ulawulo oluphezulu kunye nokulandelelana. Ndiqala ngokuchaza, eyakha isikhundla solawulo ngokwenkcazo, emva koko ndigqithele kwibhodi yamabali (okt, malunga nezikwere ezisithoba okanye ezili-12 ephepheni), kwaye wenze iziketshi ezirhabaxa, ngaphandle kweenkcukacha. Le nkqubo yindlela yokuthatha ulwazi oluntsonkothileyo kunye nokwakha ibali elibonakalayo. Ngokusebenzisa indibaniselwano yenkcazo kunye nebhodi yamabali, isiphumo siya kuba sisakhiwo esibalisayo esilungelelanisiweyo esinegunya lolawulo.
Xa kufikwa kubuchule bokuyila obulula, owona mthetho usisiseko ekufuneka uwalandele ekwakheni ubumbano kuyo yonke indawo kumgangatho wakho kukopisha oopopayi kunye notshintsho. Ngapha koko, ukuthintela yonke intshukumo kutshintsho olusisiseko ngumgaqo olungileyo wesithupha. Ngaphandle kokuba uyilo okanye i-animator yezakhono, kuya kufuneka uhlale kude ne-PPT oopopayi kunye notshintsho. Oko kwathethi, utshintsho olwenziweyo lwenza isiseko esihle sokubonisa kuba kulula, zihlala zisetyenziswa kwifilimu, kodwa hayi itshizi
Amaqhinga amabini alandelayo ahambelana neefonti. Zama ukunamathela kwiintsapho ezimbini zefonti kwinkcazo: enye yezihloko kunye nezihloko, enye yazo yonke enye into (kubandakanya imixholo engezantsi kunye nekopi yomzimba). Ngcono ngoku, sebenzisa usapho olunye lwefonti kodwa uguqule ubunzima (umz., Isibindi seentloko kunye nezihloko, rhoqo okanye ukukhanya kukopi yomzimba kunye nemibhalo engezantsi). Ndihlala ndisebenzisa uFranklin Gothic, oyifonti entle nenqabileyo. I-Calibri lukhetho olukhulu kukopi yomzimba kunye nokubhaliweyo okude, kuba bubungakanani obuncinci befonti obugcina indawo, ngelixa kulula ukusebenza nayo.
Icebo elilandelayo ngumbala. Xa kuziwa kwimibala yefonti, zihlala zisebenzisa umbala omnye kuyo yonke, okanye imibala eyahlukileyo, ngokuqinisekileyo imnyama / ingwevu. Unokuthi kuyadika, kodwa inyani inomdla wokubonwayo uyenziwa ukusuka ekusebenziseni iifonti, hayi kumnyama weefonti ezinemibala eqaqambileyo. Umdla obonakalayo uvela kulawulo oluphezulu, iifoto okanye idatha. Bambelela kwifonti enye okanye ezimbini, kwaye unciphise ukusetyenziswa kombala. Ngokufanelekileyo sebenzisa umbala omnye kuyo yonke ikopi yomzimba, kunye nee-shades ezahlukileyo zombala ofanayo ukwenza ulawulo oluphezulu.
Isilayidi ngasinye, indawo ekujoliswa kuyo
Sijonge kumgangatho wehlabathi; ngoku siza kugquma izilayidi ezizodwa. Usivavanya njani isilayidi? Uqinisekisa njani ukuba nganye ineziko lomxhuzulane kwindawo nganye? Kwakhona, isilayidi ngasinye kufuneka siqhubele phambili kwinjongo yomgangatho. Ukuba ayenzi njalo, kutheni ilapho? Nangona kunjalo, isilayidi ngasinye sidinga indawo ekugxilwe kuyo. Kufuneka kubekho ulawulo oluphezulu, ulungelelwaniso kunye nezinto ezibonakalayo ukuze kubonakale intsingiselo yesilayidi nganye icacile, ngelixa ukwahlula ulwazi olubaluleke ngakumbi kunaleyo ingabalulekanga kangako.
Njengamanye amanqanaba, kukho amaqhinga oza kuwasebenzisa kwinqanaba lesilayidi. Ubulumko obuqhelekileyo kuyilo lwesilayidi kukubonisa umbono omnye kwisilayidi. Ingxaki kukuba, akusoloko kubambekile. Olunye uluvo ngesilayidi licebo elihle leentetho ze-TED, kodwa ayisoloko isebenza kwimiboniso yequmrhu yemihla ngemihla, ngokuqinisekileyo ayisiyophando okanye imiboniso entsonkothileyo eneenkcukacha ezininzi.
Kwiintetho ezininzi zeshishini, "ukugcwaliswa kwesilayidi" akunakuphepheka. Isisombululo lulungelelwaniso olubonakalayo kunye nolawulo oluphezulu, ke endaweni yokugxila kumbono omnye kwisilayidi, iparadigm efanelekileyo kufanelekile uluvo olunye mzuzu ngamnye ngexesha. Unokuba nemibono emininzi njengoko kufuneka kwisilayidi esinikiweyo, kunye nolwazi oluninzi, kodwa eyona nto iphambili kukulawula ingqalelo yabaphulaphuli ngalo lonke ixesha. Oku malunga nokuhlengahlengisa unxibelelwano lwexesha lokwenyani phakathi kwezinto ezibonakalayo kunye namagama athethiweyo, ukuqinisekisa ukuba abaphulaphuli abadidwanga. Izinto ezibonakalayo kunye namagama kufuneka aqhagamshelwe ngokucacileyo ngawo onke amaxesha.
Elinye iqhinga - lula. Mhlawumbi inomdla, kodwa uyilo olucocekileyo lupholile. Ulawulo kunye nohlelo lwenza ukuba kube lula. Ukuba ungathandabuzeki, i-bias kufuneka ibe malunga nokusika nokubeka ngaphantsi kunokuba ngaphezulu kwesilayidi ngasinye.
Emva koko, jonga indawo engalunganga ejikeleze isicatshulwa, itshathi okanye umfanekiso. Indawo engeyiyo inceda ukucacisa imida kwisilayidi kunye nomfanekiso, kwaye yenze ibhalansi. Olu luvo olufihlakeleyo, kodwa longeza ubuchwephesha kuyilo lwesilayidi. Ufuna indawo engakhiyo kodwa hayi kakhulu; lulungelelwano oluthatha ingcinga kunye nokuzilolonga. Zama ukulinganisela, kwaye izilayidi ziya kuba nokulandelelana kunye nokucaca kokubonakalayo.
Imida yenye yolwazelelo. Bambalwa abantu abangayiyileliyo imiboniso yokujonga ngokugcina ukugcina imida elinganayo emazantsi, phezulu, ekhohlo nasekunene. Ngokombono wam, imida yenye yezona zixhobo zibalulekileyo zoyilo ezikhoyo. Ngalo lonke ixesha zama ukugcina imida, nokuba oko kuthetha ukunciphisa iitshathi, isicatshulwa, iifoto kunye nezinto ukuzenza zilingane ngelixa ugcina imida engaguquguqukiyo kwizilayidi zakho.
Okokugqibela, jonga isicatshulwa-sixoxe ngokuhla kwesilayidi, kunye nokulula, kodwa inyani kukuba uya kujongana neendonga zamagama ezibhalwe ngaphezulu. Ulwenza njani uluhlu lwabaphathi ngodonga lwamagama? Sebenzisa isicatshulwa esingenelelayo. Ngalo lonke ixesha unesiqendu esikhulu sokubhaliweyo, cinga ngokukhokela ngesihloko esifutshane sesivakalisi esishwankathela ukuthathwa kwezinto eziphambili kwinqaku. Seta umxholo ngaphandle kwentloko ngokubhaliweyo okubhaliweyo, ukuyenza ukuba ibe nkulu kancinci kunye / okanye wenze umbala wefonti ube mnyama ngakumbi kunendlela.
Okokugqibela kodwa kungagqibelelanga, jonga ngaphakathi kwesilayidi ngasinye
Inqanaba lokugqibela lokusondeza lijonga yonke into (okt, itshathi nganye, umhlathi wokubhaliweyo, umfanekiso, njl.njl.) Kwisilayidi ngasinye. Xa kuziwa kwidatha, yonke itshathi, itafile kunye negrafu kufuneka zihambelane ngokuthe ngqo kwiZiko liphela leGrivity. Cinga ngamandla ngokususa nasiphi na iseti yedatha ukuba ayiqhubeki nenjongo yokubonisa. Oko kwathethi, itshathi nganye, itafile kunye negrafu zifuna ukugxila kwayo, ibhalansi kunye nolawulo oluphezulu oluyitsalayo.
Okokuqala, vuma ukuba idatha ngumntwana wakho. Uchitha iiyure ezingenakubalwa kunye nemali uphuhlisa idatha kunye nohlalutyo, kwaye ufuna ukwabelana ngalo. Ingxaki kukuba, akukho mntu ukhathalele kangako malunga nosana lwakho (nokuba ungabelana ngemifanekiso emingaphi yabantwana), kwaye akukho mntu uyikhathaleleyo idatha yakho. Xa behambisa umsebenzi wabo, uninzi lwabantu ludlulisa idatha kuba abafuni ukulahlekisa okanye ukudida, kwaye okona kubaluleke kakhulu, abafuni ukushiya nantoni na ebalulekileyo. Oko bekuthethiwe, jonga esona sitshixo kwindima yakho njengomboniso-nkqubo kukuhambisa, ukuhambisa ulwazi olunolwazi kunokungcwaba abaphulaphuli kuyo.
Ngokwahlukeneyo, uyilo lwedatha lusebenzisa izixhobo ezifanayo noyilo lwesilayidi. Sebenzisa umbala ngokufanelekileyo nangokufanelekileyo. Ukusetyenziswa ngokukuko kwendawo engalunganga kudala ulawulo oluphezulu. Ekupheleni kosuku, idatha kufuneka ibe ligorha, ezona ndawo zibaluleke kakhulu zedatha kufuneka zivele. Lahla iilebhile ezingafunekiyo kunye nezikhongozeli, amanqaku e-hash, imigca kunye neentsomi. Lahla iintsimbi kunye neempempe ezenza ukungqubana kunye nokudideka okubonakalayo. Fumana ibali kwidatha, kwaye ungagqithisi ngaphezulu.
Ukubilisa uyilo olukhulu lwedatha kuluhlu lweepunch, kukho izinto ezintathu eziyimfuneko. Idatha kufuneka ibe:
Okokuqala, idatha kufuneka ibelula fi keleleka kwaye Echanileyo. Izembe kunye nesikali sezinto ezibonakalayo, imivalo kunye nemigca kufuneka ichanekile. Ugxininiso olubonakalayo kufuneka lubonakalise idatha. Ulawulo olubonakalayo olubonakalayo kufuneka lwenze idatha ibe ligorha, ngaphandle kweentsimbi ezingafunekiyo kunye neempempe.
Okwesibini, yidatha yakho nengqondo? Idatha kufuneka ibalise ibali kwaye iqhagamshele ngokuthe ngqo kumxholo wentetho iyonke. Ukuba akukho nto inomdla malunga nedatha, cinga ngokuyisusa. Yiba nolwazelelo malunga nokulinganisa ubungakanani beedatha, kuba ngakumbi xa kukho imbumbulu, kokukhona kunzima ukugxininisa ukuqonda.
Okwesithathu, yidatha entle, ngobuhle? Ngaba usebenzisa umbala njengesixhobo ngenjongo? Ngaba ukubonwa kwedatha kulula ngangokunokwenzeka? Ngaba kukho imigca ebhalwe ngqindilili, isicatshulwa kunye neemilo apho kufuneka khona? Ngaba sikhona isithuba esaneleyo esibi?
Xa uyila nayiphi na inkcazo, jonga ukuba isebenza njani kumanqanaba amathathu okusondeza. Kwinqanaba ngalinye, cinga ngendlela edibanisa ngayo iZiko leGrivity. Kwaye kwangaxeshanye, kufuneka ibenendawo yayo ekugxilwe kuyo. Gxila kula manqanaba mathathu kwaye intetho yakho iya kuluhambisa usuku.
tags: idatha yetshathiiitshathiIinkcukachaNgundoqoUyilo lwamagama aphambiliipower PointUyilo lwepowerpointisilayidi samandla ombaneintshumayelouyilo lwentetho
UKory Grushka ngumseki we Inkampani yamabali, iarhente yoyilo enceda iinkokheli zeshishini zibalise amabali abalulekileyo ngokwenza imiboniso, ividiyo / oopopayi, infographics kunye needashboard, phakathi kwezinye izixhobo. UKory ngumlawuli wokuyila, iqhinga lobuchule, isigqeba sokuphuhlisa ishishini kunye negqwetha langaphambili lenkampani. Unamava abanzi kwimizi-mveliso eyahlukeneyo, ephethe isicwangciso sokuthengisa, ukuvelisa izinto ezintsha kunye neeprojekthi zeenkampani zeFortune 500 ukusuka kwi-CPG ukuya kwitekhnoloji.
Ayinguye wonke umntu onokubona iwebhusayithi yakho
Jifflenow: Indlela le ntlanganiso yokuZenzekelayo yeQonga eliChaphazela ngayo uMnyhadala we-ROI